मिथिलामा बुद्ध प्रभाव
फिचर समाज समाचार
सुजीतकुमार झा जनकपुर, २५ वैशाख
मिथिलामा बुद्धको प्रभाव तत्कालीन समयमा खासै परेको थिएन । बौद्धहरूको प्रभाव बढ्छ भन्ने चिन्ता मैथिलहरूमा सुरुदेखि नै थियो । मिथिलाका मानिसहरू बुद्धको प्रभाव नपरोस् भन्ने पक्षमा थिए । त्यसैले स्वयम् बुद्धलाई पनि उनीहरूले प्रवेश निषेध गरेको इतिहास रहेको मैथिली एवं नेपालीका वरिष्ठ साहित्यकार डा. राजेन्द्र विमल बताउँछन् ।
बुद्ध जनकपुरधाम आउन खोज्दा उनलाई आउन दिइएन र उनी बाध्य भएर मखावन भन्ने स्थानमा गएर बसेकोे इतिहासकारसमेत रहेका डा. विमल बताउँछन् । उनको मृत्युपछि मात्र जनकपुरधाममा बुद्धको अस्तु आयो । मिथिलामा बुद्ध धर्मको प्रभाव नपरोस् भनेर अर्कै धर्म ‘स्मार्त’को स्थापना उनीहरूले गरेको इतिहास छ । यस धर्ममा पनि लोक देवताहरूलाई पुज्न थालियो ।
यो धर्ममा वैष्णव, शैव र शाक्त तीनवटै समूह छुट्टाछुट्टै सम्प्रदायका रूपमा विकसित भए । उनीहरू एकआपसमा झगडा गर्थे । बौद्ध धर्मको प्रभाव बढ्न थालेपछि उनीहरू सबै मिले र बुद्ध धर्मको विरोधमा उत्रिए । यसको नेतृत्व ‘उदेन’ नामक व्यक्तिले गरेको इतिहासकारहरू बताउँछन् । उदेनले तीनवटै सम्प्रदायलाई मिलाएर नयाँ धर्म र पूजाविधिको छुट्टै विधान नै विकास गरेको डा. विमल बताउँछन् । घरमा काली, भगवतीको पूजा गर्ने परम्परा थालियो । एउटा माटोको भाँडोभित्र भगवतीको पूजा गर्न थालियो । यो शाक्त धर्मको प्रतीक हो ।
बुद्धकालमा आएर लोक देवीदेवताहरूका विषयमा चिन्ता गर्न थालियो । हिन्दु धर्मको विकल्प खोज्नेहरू यसतर्फ आकर्षित भए पनि यसभित्रको कट्टर स्वभावले गर्दा गृहस्थहरूका लागि त्यति सहज हुन सकेन । इशापूर्व छैटौँ शताब्दीतिर हिन्दु धर्मका ब्राह्मणहरूको कर्मकाण्डी स्वार्थले सर्वसाधारणका लागि ज्यादै पीडादायी बन्दै गएको थियो । मानिसहरू सनातन हिन्दु धर्मको घरभित्रै आफ्नो धर्म संस्कृति जोगिने र आफूलाई पनि सहज हुने कुनै पीडाबोध नहुने विकल्पको खोजीमा थिए ।
यता नेपालमा बुद्धको राजधानी कपिलवस्तु क्षेत्र पनि भारतीय संस्कृतिकै प्रभावमा थियो भने उपत्यकादेखि अन्य पहाडी क्षेत्रमा सनातन धर्मकै बाहुल्य थियो । यही स्थिति मिथिलामा पनि थियो । उपत्यकालगायत केही स्थानमा बौद्ध धर्मको पनि प्रभाव देखिन्छ, जसलाई गौतमबुद्धभन्दा अगाडिको मान्नुपर्छ । यहाँ नेपालमा भारतको जस्तो ब्राह्मणवादको उग्र दबदबा त थिएन तर पाप र धर्मका नाममा त्यस खालको प्रवृत्ति भने बढ्दै गएको थियो ।
नेपालका शासकहरूले विशेषतः भारतको भूमिमा त्यस्तै धार्मिक उत्पीडन भोगेर आएकाले उनीहरूले आफ्नो शासन र सत्ता टिकाइराख्न धार्मिक सहिष्णुतालाई अँगालेको देखिन्छ । अर्थात् नेपालमा मुख्य रूपमा प्रचलनमा रहेको हिन्दु र बौद्ध परम्परालाई सँगै लैजाने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर, भारतमा त्यति सरल थिएन । त्यही बेलामा सिद्धार्थ गौतमले मध्यममार्गको बाटो देखाए । जसलाई पछि गएर बौद्ध धर्म भनियो । यसमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू प्रवेश गरे । जुन क्रम अहिलेसम्म पनि छ ।
मिथिलाको धार्मिक अवस्था
इशापूर्व १००० देखि लिएर ६०० सम्मको कालखण्ड जनक राजवंशको कालखण्ड हो । यो समयमा वैशव र शात् धर्मको बढी प्रभाव थियो । इशा पूर्व ६०० मा मिथिला वजी संघको सदस्य भयो । वजी संघ भनेको लिच्छवी शासक आएका वैशालीको संघ हो । यो संघको सदस्य मिथिला पनि हुन पुग्यो । त्यसबाहेक घरबाहिर हनुमानजीको पताका राख्न थालियो । मिथिलामा अहिले पनि घरघरमा हनुमानको पताका राखिएको छ । यो वैष्णव धर्मको प्रतीक हो ।
त्यसैगरी, तुलसीको मोठसँगै स–साना ढुंगा राखिएको हुन्छ, त्यो शैव अर्थात् शिव धर्मको प्रतीक हो । जनकपुरधामका पण्डितहरूले खरानीको विगुत लगाउने, चन्दन लगाउने र अबिरको टीका लगाएका हुन्छन् । ती यी तीनवटै धर्मका प्रतीक हुन् । यसरी तीनवटै धर्मलाई समाहित गरिएको पाइन्छ । यसरी विभिन्न देवीदेवताको पूजा सुरू भएको इतिहास पाइन्छ ।
त्यस्तै, याग्यबल ऋषिका गुरु थिए सूर्य । सूर्यपूजाको परम्परा अर्थात् छठको पूजा गर्न थालियो । यसबाहेक विभिन्न समयमा जातीय देवीदेवताको पनि विकास भएको छ । पूजा पद्धति पनि छुट्टाछुट्टै रूपमा विकास भएको पाइन्छ । सबै घरमा नैवेद्य दिने चलन छ । जसलाई पातेर भनिन्छ । पातेरमा खीर चढाइन्छ । कतिपय घरमा घरबाट बाहिर लैजान नहुने र अरूलाई खान दिन नहुने परम्परा पनि छ । विभिन्न समयमा विभिन्न परिस्थितिबाट विभिन्न परम्परा सुरू भएको छ । यसप्रति उनीहरूको अटुट विश्वास छ ।
डा. विमल भन्छन्, ‘मिथिलाका देवीदेवताका बारेमा भन्नुपर्दा मुख्यतः तीनवटा तत्त्वहरू पाउँछौँ– वैदिक तत्त्व, तान्त्रिक तत्त्व र लोकतत्त्व । वैदिक तत्त्व भनेको वेदमा मात्र उल्लेखित भएको तत्त्व हो । वैदिक तत्त्वको देवीदेवतासँग कुनै पनि मतलब हुँदैन । वेद, पुराण, रामायण, महाभारतजस्ता ग्रन्थ र लोकगाथाका देवीदेवताहरूको छुट्टै परम्परा छ । त्यसपछिको परम्परा भनेको तान्त्रिक परम्परा हो ।
त्यस्तै, लोक परम्परा भन्नाले राजा वा सामन्तहरूले चलाएका परम्परा अथवा लोक जीवनमा विशेष प्रभाव राख्नेहरू पनि देवताका रूपमा पुजित भएका छन् आस्थाका आधारमा । सबैभन्दा पहिले वैदिक, पौराणिक कुरा गरौँ । बृहान्द उपनिषतमा एक ऋषि र उनका शिष्यबीच भएको संंवादको प्रसंग छ । जति पनि वैदिक ऋचाहरू अर्थात् श्लोकहरू छन्, तिनीहरूको छुट्टाछुट्टै श्लोकहरू छन् । छुट्टाछुट्टै देवताहरू छन् र छुट्टाछुट्टै ऋषिहरू पनि छन् ।
यसैगरी, स्तुतिहरूमा पनि देवीदेवताको नाम आएको छ । यसरी हेर्दा असंख्य देवीदेवताहरू देखा पर्दछन् । इन्द्र, वरूण, मरुद मात्र होइन, असंख्य देवीदेवताहरू छन् । सरसर्ती हेर्दा कतिवटा देवीदेवता होलान् भनेर निश्चित संख्या तोक्न सकिने अवस्था छैन । यही सन्दर्भमा शिष्यले ऋषिसँग प्रश्न गर्दा ऋषिले ३३ कोटी देवताहरू छन् भनेर जवाफ दिन्छन् ।
शिष्यले फेरि प्रमुख देवीदेवताका नाम भन्न भनेपछि ऋषि भन्छन्, ‘३३३९ देवताहरू छन् ।’ शिष्यले यति धेरै देवीदेवताको नाम कण्ठ गर्न नसकिने बताएपछि ऋषि फेरि जवाफ दिन्छन्, ‘३३ वटा भने हुन्छ ।’ फेरि ३३ वटा देवता पनि धेरै भयो भनेपछि ऋषिले ३ वटा प्रमुख देवताको नाम लिन्छन् । ३ वटा पनि धेरै भयो भनेपछि उनले अन्त्यमा एउटा मात्रै देवता छन् भन्छन्, ‘एको हम बहु सामेद अर्थात् माध्यममा मूल देवता ब्रह्म हुन् र उनका हाँगा फैलिएको मात्रै हो ।’
जेजति देवीदेवताका नामहरू छन, ती सबैका मूल देवता ब्रह्मकै नामबाट सुरू भएका छन् । यिनीहरूलाई वेदमा विभिन्न कोटीमा विभाजन गरिएको छ । जस्तैः स्थानीय देवी अर्थात् स्थानक्रमका आधारमा पुजिने देवी, दिउलोकका देवताहरू । आकाशभन्दा माथिका देवीदेवता, जसलाई देख्न सकिँदैन । त्यस्तै, अन्तरिक्षका देवीदेवता, जसलाई देख्न सकिन्छ । सूर्य, चन्द्र इत्यादि ।
त्यस्तै, पृथ्वीलोकका देवीदेवताहरू । त्यस्तै, परिवारक्रमले पनि देवीदेवताहरू निर्धारण गरिएको छ । जस्तो शिव परिवार, बसु, मरूद आदिका परिवार । त्यस्तै, समूहक्रमअनुसार पनि देवीदेवताको निर्धारण गरिएको छ । इन्द्रादी देव, मित्रात्री देव । सर्वदेव अर्थात् सर्व देवाय नमः । यी जति कोटीका देवीदेवता भए पनि यिनीहरूका मूल देवता भनेको ब्रम्ह र त्रिनिटी देवता ब्रम्हा, विष्णु, महेश्वरलाई मान्ने गरिन्छ ।
एउटा अचम्मको कुरा के छ भने संसारमा जति पनि धर्महरू छन् । ती सबै धर्ममा कुनै न कुनै रूपमा त्रिदेवको कल्पना गरिएको छ । उदाहरणका लागि मेसोपोटानियाको सभ्यतालाई लिऔँ । मेसोपोटानिया सभ्यता जसलाई बाबुली धर्म भनिन्छ । यसमा गजला र फरादको घाँटीभन्दा तलको भूभागमा त्रिदेवको कल्पना गरिएको छ । ऐन, सूर्य देवता, चन्द्र देवता र जलको देवता अर्थात् इए, त्यसपछि सम्स, सिन अर्थात् चन्द्रमा देवता ।
त्यस्तै, शुक्र देवी भनेर भनिन्छ । यो परम्परा रोम, इजिप्ट र क्रिश्चियन धर्ममा पनि पाउन सकिन्छ । त्रिनिटीको परम्परा वेदमा मात्र होइन, अन्य धर्ममा पनि पाइन्छ । यास्टमुनिले २ किसिमका धारणाहरू रहेको बताएका छन् । सुष्मबाट स्थुलको विकाससँगै विभिन्न देवीदेवताको कल्पना गरिएको छ । जनजीवनमा आवश्यकताअनुसार देवीदेवताको कल्पना गरियो । तिनलाई विस्मयको दृष्टिले मानिसले हेरे । पानी कसले पार्‍यो । कसरी वनस्पतिको जन्म भयो भनेर हेरियो । यासमुनिले आत्माबाटै शरीरको विकास भएको बताएका छन् ।
मिथिलाका देवीदेवताको कुरा गर्दा धेरै वैदिक देवीदेवताहरू छन् । हनुमान, धर्मराज, नरसिंहका कथामा देवीदेवताहरू छन् । यी वैदिक देवीदेवताहरूको समागम कसरी भयो भनेर हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै, जुन देवताहरूका परिकल्पना थिएन, विभिन्न कालक्रममा मूर्तिहरू बन्न थाले । मूर्ति बनेसँगै यिनका सम्प्रदायहरूको पनि विकास हुन थाल्यो । तान्त्रिक तत्त्वमा ८४ वटा तत्त्व हुन्छन् ।
यसमा भैरवलगायतका देवीदेवताको कल्पना गरिएको छ । तराईका देवीदेवताका प्रसंगमा रोचक कुरा के छ भने लोकजीवनमा जो प्रभावशाली भएका छन्, उनीहरूलाई पनि देवता मानिएको छ । जस्तैः सलेस पुसादहरूका, लालवन बाबा चमारहरूका, श्यामसिंह डुमहरूका देवता मानिएका छन् । यसमा जातीय देवताहरू पनि स्थापना भएका छन् । यसबाहेक कतिपय देवीदेवताको विकास हामीलाई नै थाहा छ ।
सामूहिक रूपमा पुज्ने देवीदेवतालाई देवार भनिन्छ । जस्तैः ढेलमरवा । अर्थात् माटोको डल्लो । यसको छुट्टै प्रयोजन छ । भूमि र प्रकृतिसित सम्बन्धित देवीदेवताहरूलाई पुज्ने गरिन्छ । जस्तैः अक्षय नवमीको पूजा । बडसावित्रीको पूजा । जुडशीतलमा प्रकृतिको पूजा गर्ने र पानीले सिञ्चित गर्ने गरिन्छ ।
अर्को अचम्म त के छ भने कतिपय देवीदेवता मानिसबाटै भएका छन् । माता चढेको भन्दै तिनलाई पुज्ने गरिएको छ । लगभग ३६ वटा देवीको मिथिलामा यसरी पूजा भइरहेको छ । यसबाहेक ऐतिहासिक क्रममा पनि केही देवीदेवताको विकास भएको छ । ऐतिहासिक प्रयोजनबाट कुल देवीदेवताको विकास भएको पाइन्छ ।
मुगलहरूको आक्रमणले सम्पूर्ण आर्य वर्ष त्राहिमाम थियो । मुसलमानहरूले गरेको अत्याचार देखेर उनीहरूले विधर्मी बनाउने भए भनेर सबै त्राहिमाम भए । उनीहरूको अत्याचार सहन नसकेर १५ हजार महिलाले एकै पटक आत्मदाह गरेको उदाहरण इतिहासमा छ । त्यसबाहेक मूर्ति, मन्दिरहरूको विनाश गर्ने काम मुसलमानहरूबाट भए ।
यी आक्रमणबाट जोगिएका मिथिलाका काली, बन्नी, घोरियालगायतका देवीदेवतालाई सुँगुर चढाउने परम्पराको थालनी भयो । मुसलमानहरू सुँगुरलाई घृणा गर्ने गर्दथे । मुसलमानहरूबाट आफ्ना कुल देवताको रक्षा गर्न उनीहरूले सुँगुर पाल्न थाले । दैलोमै सुँगर देखेपछि घिनाएर घरभित्र छिर्दैनन् र आफ्नो कुलदेवताको रक्षा हुन्छ भनेर सुँगुर पाल्ने परम्परा बस्यो ।
हरेक घरमा मूलदेवी हुने भएकाले सबैले सुँगुर पाल्न थाले र आफ्नो कुल देवीको सुरक्षा गरे । हुँदाहुँदा देवीदेवतालाई सुँगुर नै चढाउन थालियो । यसका साथै केही पीरहरूलाई पनि देवीदेवतासँग राख्न थालियो । र, ती पीरहरू पछि कुलदेवताका रूपमा स्थापित भए । उदाहरणका लागि प्रकृतिबाट लिइएकी देवी ज्वालामुखीलगायत उनका १४ सहयोगीहरूलाई कुलदेवीका रूपमा पुज्ने गरिएको छ ।
यीसँगै पालातिर भन्ने पीर पनि छ । यी देवीदेवताको स्तुति पनि मुगल शैलीमा गाइन्छ । मुसलमानहरूको प्रभावका कारण राग फिर्तौसी, इमामीजस्ता रागहरूको प्रवेश हुन पुगेको छ । बाला रे बाला तोहे करिए पुकार हो मिया करिए पुकार हाथ लिए मिट्टीवाला बात नहोए होथ, जालपाके हो कुमलेके माहिया हो हाथ, होथ कहिए हो सलिह । यसरी उर्दू मिश्रित मैथिलीमा स्तुति गरेर पूजा गर्ने चलन छ ।
त्यसैगरी, सुफी सम्प्रदायभित्र ६ प्रकारका समूह छन् । इशापूर्व १००० वर्षअगाडि सुफी अरबमा विकास भयो । यसको मिथिलामा पनि प्रभाव पर्‍यो । सुस्तीया, कादरिया, सिस्तियालगायतका सम्प्रदायहरूको प्रभाव मिथिलाको कला, संस्कृति र परम्परामा पनि पर्न पुग्यो । मिथिलाका कुलदेवी र इष्ट देवीहरू स्थापित हुन पुगे । यसबाहेक धेरै किसिमका पीरहरूको पनि पूजा गरियो भने यसमा मलङ भन्ने खास पीर हुन्छ । मलङ बाबाका रूपमा गाउँभरि पूजा गर्ने परम्परा छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २५, २०७७, १७:१४:००